Iberian Legacy Croquettes | Nutri Nri
NutriDiet | | Ezi ntụziaka
Croquettes bụ otu n'ime nri ndị ahụ ị na-agaghị echefu. N'ihi na ha na-enwe mmeri mgbe niile ma ọnụ ọgụgụ ka ukwuu hụrụ ya n'anya. Ha na-anabata ụdị ihe dị iche iche ma taa, anyị nzọ na Ihe nketa nke Iberia n'ụdị ham dị elu. Nke ahụ na-agbakwụnye ọtụtụ uru ịtụle.
Ya mere oburu na anyi tinye onu ham na croquettes, anyị ga-enwe ihe karịrị ihe mgbawa na tebụl anyị. N'ihi na a whim dị ka nke a anyị nwere ike inye ya onwe anyị. Chọrọ ịga nke ọma n'ihu ndị ọbịa gị? Mgbe ahụ egbula oge ịgbaso usoro ndị anyị na-egosi gị ebe a.
1 Efrata Iberian ketara croquettes maka mmadụ 4
3 Uru nke ham ham
Efrata Iberian ketara croquettes maka mmadụ 4
50 gram nke mmanụ oliv (ọ bụ ezie na ịnwere ike iji bọta ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa)
75 nke ntụ ọka
250 gram nke ham Iberia
Nutmeg nụrụ ụtọ
Achịcha achịcha na ntụ ọka iji kpuchie croquettes
Mmanụ maka ighe.
na Ham croquette ha nwere nkwadebe di mfe. Nke mbụ, anyị na-etinye pan na ọkụ na mmanụ ma ọ bụ butter dabere na ihe ị kpebiri. Shouldkwesịrị ikpo mmanụ ahụ ntakịrị ma ọ bụ chere ruo mgbe butter ga-agbaze kpamkpam. N'oge a, ị ga-agbakwunye yabasị ị ga-egbutu nke ọma. Anyị ga-akwacha ya, yabụ anyị ga-akpali ya maka nkeji ole na ole.
Mgbe yabasị ahụ na-enweta mmetụ ahụ, oge eruola ka ịgbakwunye ya Umu-Nwog, nke anyị ga-egbutu n'ime obere iberibe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwaahịa ọzọ yiri nke a, ị ga-amararịrị na Ihe nketa Iberia n’ụlọ ikpe bekee ọ nwere ihe pụrụ iche iche na ekpomeekpo ị ga-anụ. Ma, ma eleghị anya, maka ọdịnihu Ezi ntụziaka na menus. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-enwe yabasị na ham n'ime pan nke anyị ga-agbakwunye ntụ ọka ahụ wee hapụ ya ka ọ sie nri maka ihe dịka 6 nkeji. Ihe dị anyị mkpa bụ ka ntụ ọka ahụ tụfuo ụtọ ya, mana ọ na-agbakwunye ihe na-esi na ya apụta.
Mgbe minit ndị ahụ gachaa, ọ bụ oge ịgbakwunye mmiri ara ehi na ịmagharị mgbe niile. Anyị ga-achọpụta otu o si ekpopu ma anyị ga-agbakwunye ntakịrị. Mgbe edemede nke ọma, anyị ga-egbochi akpụ akpụ. Mgbe anyị nwere mgwakota agwa na-adịghị oke nnyapade ma ọ bụghị kpam kpam rụrụ, ọ bụ oge nụrụ ụtọ nnu, tinye nutmeg, nwuo ọzọ ma gbanyụọ okpomọkụ. Anyị ga-awụsa mgwakota agwa n'ime isi mmiri gbasaa nke ọma ma hapụ ka ọ dị jụụ. Mgbe oyi na-atụ, anyị ga-ewere ya na ngwa nju oyi.
Can nwere ike ịhapụ ha ọtụtụ awa ma ọ bụ, mee nkwadebe a n'abalị ma chere rue echi. Iji mechaa efere ahụ, anyị ga-ewere akụkụ nke mgwakota agwa ma jiri ha mee bọọlụ ma ọ bụ, nye ha ọdịdị ogologo, dịka mmasị gị si dị. Mgbe inwere ha, igafere ha site na ntụ ọka, akwa etiri na ogbe achicha. Are na-etinye ha na pan na mmanụ ọkụ ma a ga-eghe ha na obere ogbe, nke mere na nsonaazụ ahụ dị mma. Ugbu a, i nwere ike ịnụ ụtọ ụtọ pụrụ iche!
Uru nke ham ham
El Ihe nketa nke Iberia Hipercor ị nwere nhọrọ iji nwaa ngwaahịa ndị ọzọ nwere ogo dị elu. Ma taa, anyị lekwasịrị anya ham, nke bụ ihe dị mkpa na ndụ anyị. N'okwu a, agbakwunyere na otu n'ime efere ma ọ bụ tapas par kacha mma, ha na-ewepụta otu n'ime nri pụrụ iche. Ma olee nnukwu uru ọ bara?
Ekwesiri ikwu na abụba nke ezi Iberia nwere oleic acid karịa ndị ọzọ. Nke a na - eme ka nsonaazụ ham gị ọzọ bara uru na cholesterol. Na-eme ihe, ya mere, ezi ka bilie. Iri ugboro ole na ole n'izu ma ọ bụ ọbụna atọ na obere obere, ọ bụ onyinye bara uru zuru oke maka ahụike anyị. Na mgbakwunye, o nwere protein na echefughi vitamin B1, B6, B12 na E. Mkpụrụ akụ nọkwa na nketa nke ndị Iberia site na ebe anyị na-egosipụta ma iron na ọla kọpa ma ọ bụ calcium na zinc. Ka na-eche ma ị ga-ewebata ya na nri gị ma ọ bụ na ị gaghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nri » Ezi ntụziaka » Ihe nketa nke Iberia